Inona no Tokony ho Fantatrao fa Ny Daty Voalohany amin'ny Filipiana Vehivavy Hihaona Filipiana Vehivavy
Inona no Tokony ho Fantatrao fa Ny Daty Voalohany amin’ny Filipiana Vehivavy Hihaona Filipiana Vehivavy
Philippines, na dia nandritra ireo fotoana maoderina, dia mbola fehezin’ny nentim-paharazana amin’ny fenitra izay no lasa hatramin’ny voalohany taranaka. Mbola mihazona ny lanjany ny teny finoana izay nitarika azy ireo nandritra ny taonjato maro. Izany dia noho ny manana fiaviana Shinoa ankehitriny ny Filipiana. Ireo soatoavina ireo no mbola andrasana avy ny olona rehetra amin’ny alalan’ny fiaraha-monina. Filipiana vehivavy dia mbola andrasana ny vehivavy iray-toy ny fomba sy toe-tsaina. Noho izany, ny fiarahana amin’ny Filipiana vehivavy dia mety ho tena sarotra ny fotoana voalohany raha tsy fantatrao ny Filipiana ny kolontsaina. Na dia mety ho toa ny hita, mbola mandoa ny mahafantatra azy tsara, ka afaka hahita fahombiazana voalohany daty. Mangataka alalana sy hampahafantatra ny tenanao araka ny tokony ho izy. Filipiana vehivavy no nikarakara ny ray aman-dreny toy ny ankizy mihitsy aza izy ireo raha ny olon-dehibe sahady. Ny ray aman-dreny tsy mitsahatra mba hikarakara ny zanany, noho izany dia tsara ny manontany ny ray aman-dreny ny daty ho amin’ny fahazoan-dalana avy ny mivoaka. Aza adino mihitsy ny hampahafantatra ny tenanao araka ny tokony ho izy. Fomba fanao ireo lehilahy fahaiza-manao ny anao. Izany dia manomboka amin’ny fanehoana kely aloha noho ny nanaiky ny fotoana sy ny zava-dehibe kokoa, mitondra an-trano ny daty ny fotoana indray. Ho azo antoka foana fa izy no aina, ary tsy mametraka azy eo amin’ny toerana hafahafa. Ho chivalrous lehibe plus ka dia handresy mora foana ny Filipiana vehivavy ny fo. Izany dia azo atao amin’ny hetsika tsotra toy ny fanampiana ny daty fanokafana ny varavarana.
Filipiana vehivavy ny ankamaroany dia voatokana, nefa izy manana ny sahisahy lafiny izay te-hijery zavatra vaovao. Fantaro ny voly ny daty fa tsy ny halehiben’ny loatra flamboyant. Hitandrina ny zava-mahaliana azy na inona na inona amin’ny samy miresaka momba ary tsy handao azy vendrana fotoana izao. Hahafantatra azy tsara kokoa sy maneho ny fankasitrahana azy tsara toetra. Ho marin-toetra, ary aza tsy hanaisotra ny tricks. Rehefa mahazo ny ampahany manomboka mahafantatra ny tsirairay, fotsiny ny tenanao sy ny ho marin-toetra. Ny fahamarinan-toetra dia hahazo anao hatramin’izao ary mety hahatonga ny daty kokoa ny fahatakarana sy ny fiheverana.
Tsy hilaza lainga fotsiny mba hahatonga ny daty
Filipiana vehivavy ihany no afaka hanome anao ny fitokiany raha toa mahatsapa fa tsy misy mendri-pitokisana ny olona.
Manao izay hitranga amin’ny maha-marin-toetra
Mampiaraka ny Filipiana vehivavy tsy mitaky zavatra hafahafa, dia mety ho mora foana ho gaga na dia kely fotsiny nefa manan-danja.
Manome ny daty tsara ny fotoana amin’ny voalohany hitsena ny azo atao amin’ny alalan’ny fitandremana ny zava-mahaliana azy. Fa izany koa ny tsara ho fantatra rehefa mba hanome ny daty, ny toerana, toy ny amin’ny olona izay mbola tsy niaraka mety tsy ho mora izany tamin’ny voalohany. Ny daty voalohany dia rehetra momba ny maha-aina amin’ny izy samy izy sy nanomboka ho lasa nahalala. Raha toa ianao ka handeha mba ho tena hanao ny daty ho zavatra matotra kokoa, dia mety ho tianao ny hametraka ny fototra mafy. Ny sasany mety ho natahotra ny antsipirihany izy ireo fa tokony handeha amin ny alalan vao misintona ny daty voalohany araka ny tokony ho izy. Fa ny fandoavana ny fanajana ny Filipiana iray vehivavy ny finoana sy ny fomba amam-panao dia hahazo anao ny matoky ny fomba haingana azo atao. Dia toa ireo rehetra sarotra loatra, fa ny Filipiana vehivavy ny finoana dia mifototra amin’ny tsotra ny dos sy don’ts eo amin’ny fiainana. Ny voalohany daty ho tonga amin’ny dingana voalohany ny zavatra maro hafa manan-danja sy lalina kokoa ny manaraka, ary izay ihany no hitranga raha manao ny zavatra rehetra tsara sy nanao zavatra mahafinaritra avy amin’ny daty
← Hafainganam-pandeha Mampiaraka ao Moskoa Mampiaraka R-Tanàna
Intergenerational ny Fifandraisana ao Filipina →